Tao anatin’ny telo volana: tafakatra 16 ireo matin’ny aretina pesta | NewsMada
Tao anatin’ny telo volana: tafakatra 16 ireo matin’ny aretina pesta
16 ny olona voamarina fa voan’ny aretina pesta ka namoy ny ainy, nanomboka 1 aogositra ka hatramin’ny 26 novambra lasa teo. Voan’ny aretina pesta atodintarina ny enina amin’ireo ary ny 10 kosa, tratran’ny pesta miseho amin’ny tratra. Miisa 49 ireo olona voamarina fa nahitana trangan’aretina pesta tamin’ireo olona rehetra nanaovana fitiliana. Mahakasika ny pesta atodintarina, 38 ny voamarina fa nahitana trangan’aretina. Ho an’ny pesta aretin-tratra indray, 11 ireo olona voamarina fa nahitana trangan’aretina, mbola velona soa aman-tsara ny iray rehefa nanaraka fitsaboana.
Ireto avy ireo distrika ahitana ireo trangan’aretina voamarina fa pesta : i Tsiroanomandidy, Ambalavao, i Befotaka, i Manandriana, Ambatofinandrahana, i Midongy Atsimo, Anjozorobe, Ankazobe, i Miarinarivo, Ambositra, i Moramanga, i Betafo ary i Faratsiho. Mitana ny laharana voalohany amin’ny isan’ny tranga ny ao amin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy, nahitana marary 13 ka maty avokoa ny fito tamin’ireo.
Anisan’ny antony nanaovana ny hetsika Andron’ny fanadiovana isaky ny zoma amin’ny faran’ny volana ny fampianarana ny mponina sy ny mpiasa ho zatra hanadio ny toeram-piasany sy ny tokantranony hisorohana ny loto miteraka valanaretina.
Eto an-dRenivohitra, manao ezaka ny kaominina sy ny Samva fa tsy mahafaka tanteraka ny fiparitahan’ny fako, saika efa eny amin’ny arabe mihitsy. Ankoatra ny fofona, miseho koa ny rano maloto miangona rehefa mirotsaka ny orana ka tsentsina ny lakandrano hivarinany.